Tun Tun's Photo Diary: March 2017
2013-Dec-24, န၀ါ မြန်မာဘူဖေး ဆိုင်မှာ နေ.လည်စာစားပြီး တည်းဖို. ဟိုတယ်ရှာရပါတယ်။ Christmas Holiday ကာလမို. ပုဂံမှာ ဧည့်သည်တွေ များတယ်၊ ဟိုတယ်တွေ တော်တော်များများက ပြည့်နေပြီ။ ဟိုတယ် ၄၊ ၅ ခုလောက် မေးကြည့်တယ်။ တချို.ဟိုတယ်တွေက ဈေး မတန်မဆ တွေ တောင်းတယ်။ ကိုယ်တိုင်ကလည်း Budget ဟိုတယ်ပဲ ရှာတာဆိုတော့၊ နောက်ဆုံးမှာ ညောင်ဦးဈေးနဲ. သိပ်မဝေး တဲ့ Shwe Na Di Guesthouse မှာ တည်းဖြစ်သွားတယ်။ အဲ့ဒီမှာ အခန်း ၂မျိုး ရှိတယ်။ ဈေးပေါတဲ့ အခန်း (ရေချိုးခန်း၊ အိမ်သာ အပြင်မှာ စုသုံး) အဲ့ယားကွန်းမပါ ၊ ဈေးနည်းနည်းများတဲ့ (ရေချိုးခန်း၊ အိမ်သာ တွဲရပ် ပါ) အဲယားကွန်းပါ ဆိုပြီးရှိတယ်။ ဈေးမဆိုတာနဲ. အဲယားကွန်း အခန်းပဲ ယူလိုက်တယ်။
at 3/29/2017 11:34:00 PM Links to this post No comments:
Labels: Bagan, Food, Myanmar Food, Sunset
at 3/13/2017 08:30:00 PM Links to this post3comments:
2013-Dec-21, မနက်စာ တိုဟူးနွေး အိမ်မှာချက်စားတယ်။ ခေါ်ပုတ်တွေ လဲ ၀ယ်ထားတာရှိတော့ တိုဟူးနွေးနဲ. ခေါပုတ်နဲ. တွဲပြီးစားမယ်။ တိုဟူးနွေး ကြိုတဲ့သူ က ကြို။ ခေါ်ပုတ်ဖုတ်တဲ့ သူကဖုတ် နဲ. အလုပ်ကိုရူပ်လို.။
at 3/06/2017 08:58:00 PM Links to this post No comments: